चैत ३१ गते यूनाइटेड मोदीको आइपीओ बाँडफाँड हुने
काठमाण्डौ । यूनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमीटेडको आइपीओको बाँडफाडँ बिहीबार(चैत ३१ गते) हुने भएको छ । बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल क्यापिटल लिमीटेडका अनुसार लाजिम्पाटस्थित एनआइबिएल क्यापिटलको कार्यालय परिसरमा बिहीबार बिहान ९ बजे आइपीओको बाँडफाँड हुनेछ । यूनाइटेड मोदीले फागुन १९ देखि २३ गतेसम्म १७ लाख २५ हजार कित्ता आइपीओ...
दोश्रो बजार झै यता पनि उस्तै 'उछाल' !
काठमाण्डौ । दोश्रो बजारमा उछाल आइरहेको समयमा आइपीओमा समेत लगानीकर्ताको आकर्षण अचाक्ली बढेको उदाहरण स्वदेशी लघुवित्तको आइपीओको सन्दर्भमा देखिएको छ । यो माइक्रो फाइनान्सले खुलाएको आइपीओमा तेश्रो दिनसम्म मागको तुलनामा करिब ५० गुणा बढी आवेदन परिसकेको छ । मंगलबार चौथो तथा अन्तिम दिन रहेको र यसअघिका आइपीओको अभ्यासमा अन्तिम दिन अझ बढी...
स्वदेशीको आइपीओमा लगानीकर्ताको मरिहत्ते, दोश्रो दिनमै २४ गुणा बढी आवेदन
काठमाण्डौ । सुनसरीको इटहरीमा मुख्य कार्यालय रहेको स्वदेशी लघुवित्त बित्तीय संस्था लिमीटेडले निश्कासन गरेको प्राथमिक सेयरमा अचाक्ली आकर्षण देखिएको छ । यो कम्पनीको आइपीओमा दोश्रो दिनसम्म माग भन्दा करिब २४ गुणा बढीको प्रस्ताव परेको बिक्री प्रबन्धकको काम गरिरहेको एनएमबी क्यापिटल लिमीटेडले जनाएको छ । क्यापिटलका एक अधिकारीका...
बैशाख ७ देखि महुलीको १.२० करोडको आइपीओ(आवेदन केन्द्रको सूचिसहित)
काठमाण्डौ । महुली सामुदायिक लघुवित्त बित्तीय संस्था लिमीटेडले सर्वसाधारणका लागि आगामी बैशाख ७ देखि १ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक सेयरको निश्कासन गर्ने भएको छ । एकसय रुपैयाँ अंकित मूल्यको कुल १ लाख २० हजार कित्ता सेयर आइपीओ गरिने र बैशाख ७ देखि ११ गतेसम्म यसका लागि लगानीकर्ताले आवेदन दिनुपर्ने कम्पनीले सोमबार एक सूचनामार्फत...
स्वदेशी लघुवित्तको आइपीओमा अचाक्ली आवेदन, पहिलो दिन नै ७ गुणा
काठमाण्डौ । सुनसरीको इटहरीमा मुख्य कार्यालय रहेको स्वदेशी लघुवित्त बित्तीय संस्थाको आइपीओमा पहिलो दिन माग भन्दा ७ गुणा बढी आवेदन परेको छ । यो कम्पनीले चैत २५ गतेदेखि ३ करोड रुपैयाँको ३ लाख कित्ता सेयरको प्राथमिक निश्कासन थालेको थियो । बिक्री प्रबन्धकको काम गरिरहेको एनएमबी क्यापिटलका अनुसार पहिलो दिन नै यो कम्पनीको आइपीओमा देशभरबाट...
स्थानीयका लागि ४.१० र सर्वसाधारणका लागि ६.१५ करोडको आइपीओ गर्दै रादी
काठमाण्डौ । रादी विद्युत कम्पनी लिमीटेडले ४ करोड १० लाख मूल्य बराबरको आइपीओ निश्कासन गर्ने भएको छ । यो कम्पनीले लमजुङ जिल्लाका आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि ४ लाख १० हजार कित्ता आइपीओ निश्कासन गर्न लागेको हो । कुल निश्कासन हुने आइपीओमध्ये २ लाख ४६ हजार कित्ता जिल्लाका अति प्रभावित गाउँपालिका मस्र्यांग्दी वडानम्बर ५...
हिमालयन पावर पनि आइपीओ जारी गर्दै
काठमाण्डौ । हिमालयन पावर पार्टनर लिमीटेडले सर्वसाधारणका लागि २१ लाख ३० हजार ८ सय ३४ कित्ता प्राथमिक सेयर निश्कासन(आइपीओ) गर्ने भएको छ । यो कम्पनीले आइपीओ निश्कासनको माग गर्दै धितोपत्र बोर्डमा ५ दिनअघि आवेदन दिएको हो । कम्पनीको आइपीओको निश्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमीटेड तोकिएको छ । नेपालको एक मात्र...
स्वदेशी लघुवित्तको आइपीओ चैत २५ देखि
काठमाण्डौ । सुनसरीको इटहरीस्थित स्वदेशी लघुवित्त बित्तीय संस्था लिमीटेडले आगामी चैत २५ गतेदेखि आइपीओ निश्कासन गर्ने भएको छ । यो कम्पनीले ३ करोड मूल्यको ३ लाख कित्ता आइपीओ निश्कासन गर्न लागेको हो । धितोपत्र बोर्डले स्वदेशी लघुवित्तलाई चैत ७ गते आइपीओ निश्कासनको स्वीकृति दिएको थियो । कम्पनीले बुधबार प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार...
आइपीओ/एफपीओमा तँछाडमछाड, ८० करोड बढीको सेयर आउँदै
काठमाण्डौ । बजारमा धितोपत्रहरुको सार्वजनिक निश्कासनको लहर नै चल्ने भएको छ । ३ कम्पनीले आइपीओ जारी गर्ने अनुमति नै प्राप्त गरिसकेका छन् भने १२ कम्पनी धितोपत्र बोर्डबाट आइपीओ तथा एफपीओ निश्कासनको पाइपलाइनमा छन् । राधी विद्युत कम्पनी, महुली सामुदायिक लघुवित्त बित्तीय संस्था र स्वदेशी लघुवित्त बित्तीय संस्थाले आइपीओ निश्कासनको...
नेपाल हाइड्रोले ३ लाख ९० हजार कित्ता आइपीओ निश्कासन गर्ने
काठमाण्डौ । नेपाल हाइड्रो डेभलपर लिमीटेडले सर्वसाधारणका लागि ३ लाख ९० हजार कित्ता आइपीओ निश्कासन गर्ने भएको छ । एकसय रुपैयाँ अंकित मूल्यको कुल ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको आइपीओ निश्कासनका लागि यो कम्पनी धितोपत्र बोर्ड पुुगेको हो । यसको आइपीओ निश्कासनका लागि एनएमबी क्यापिटल लिमीटेड बिक्री प्रबन्धक तोकिएको छ । सर्वसाधारणका...
तीन करोडको आइपीओ ल्याउँदै स्वदेशी लघुवित्त
काठमाण्डौ । सुनसरीको इटहरीमा मुख्य कार्यालय रहेको स्वदेशी लघुवित्त बित्तीय संस्था लिमीटेडलाई धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक सेयरको निश्कासनको अनुमति दिएको छ । यो कम्पनीलाई धितोपत्र बोर्डले १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको ३ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि आइपीओ गर्न स्वीकृति दिएको हो । स्वदेशी लघुवित्तको आइपीओ निश्कासन तथा...
महुलीलाई १.२० लाख आइपीओको अनुमति, सपोर्ट पाइपलाइनमा
काठमाण्डौ । सप्तरीमा मुख्य कार्यालय रहेको महुली सामुदायिक लघुवित्त बित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणका लागि १ लाख २० हजार कित्ता सेयरको प्राथमिक निश्कासनको अनुमति पाएको छ । शुक्रबार धितोपत्र बोर्डले यो लघुवित्त संस्थालाई १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यको कुल १ करोड २० लाख मूल्यको सेयर आइपीओको अनुमति दिएको हो । यो कम्पनीको आइपीओ निश्कासनका...
राधी जलविद्युतले ४.१० लाख कित्ता आइपीओ जारी गर्ने
काठमाण्डौ । धितोपत्र बोर्डले राधी विद्युत कम्पनी लिमीटेडलाई ४ लाख १० हजार कित्ता सेयरको प्राथमिक निश्कासन(आइपीओ) गर्न अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यो कम्पनीले ६ लाख १५ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारणका लागि समेत निश्कासन गर्नेछ । यो जलविद्युत कम्पनीलाई लमजुङ जिल्लाका आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि पहिलो चरणमा १ सय...
फरवार्डको आइपीओ बाँडफाँडमा अनियमितता, धितोपत्र बोर्डमा उजुरी
काठमाण्डौ । फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्सले निष्काशन गरेको साधारण सेयर बाँडफाँडका दौरान अनियमितता भएको भन्दै छानबिनका लागि धितोपत्र बोर्डमा उजुरी परेको छ। एउटै आवेदन नम्बरबाट धेरै फराम संकलन गरी बाँडफाँड प्रक्रियामा भएका गल्ती ढाकछोपको प्रयास भएको भन्दै अन्यायमा परेका साना लगानीकर्ताहरुलाई न्याय दिलाउन उजुरीमार्फत...
यूनाइटेड हाइड्रोको आइपीओमा तेश्रो दिनसम्म २ अर्ब बढीको आवेदन
काठमाण्डौ । यूनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरले निश्कासन गरेको आइपीओमा परम्परागत विधिबाट मात्रै तेश्रोे दिन(आइतबार)सम्ममा २ अर्ब बढीको प्रस्ताव परेको छ । १७ करोड २५ लाख मूल्यको १७ लाख २५ हजार कित्ता आइपीओमा दोश्रो दिनसम्म ८९ करोडको प्रस्ताव परेकोमा तेश्रो दिनसम्म २ अर्ब बढीको आवेदन परेको हो । क्यापिटलका एक अधिकारीका अनुसार आस्वाबाट...
एनआइसी एशिया लघुवित्तको आइपीओ भोलि नै बाँडफाँड हुने, कसले कति पाउँदैछन् ?
विश्वकै धनाढ्य जेफ बेजोसको सम्पत्तिमा रेकर्डतोड वृद्धि, पूर्वपत्नी पनि मालामाल
आगामी तीन दिन देशभरि नै वर्षाको सम्भावना
भारतमा कोरोनाविरुद्ध दोस्रो भ्याक्सिन तयार, यसै महिना मानिसमा परीक्षण